ထိပ်တန်း 12 တူရကီတွင်လူကြိုက်များသောသဘာဝကျောက်ခဲ | Flodeal Inc မှ.
ထိပ်တန်း 12 တူရကီတွင်လူကြိုက်များသောသဘာဝကျောက်ခဲ
တူရကီကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးကျောက်ခေတ်တင်ပို့မှုနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုဖြစ်တယ်, တူရကီစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းက၎င်း၏ပွိုအလှအပနှင့်ကြော့ရှင်းများအတွက်ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, တူရကီလည်းပြင်ပကမ္ဘာကနေစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်တင်သွင်းရန်. တူရကီ၏ geolocation အဖြစ်ကောင်းစွာကုန်သွယ်၏အကောင်းဆုံးတည်နေရာကအချက်အချာစေသည်. ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့တူရကီ Market ကအတွက်လူကြိုက်များအိန္ဒိယသဘာဝကျောက်ခဲကိုပြသပါလိမ့်မယ်.
Green Marble or commonly known as Verde Guatemala Marble is being used in Turkey asaflooring and wall cladding needs. This beautiful marble is used in the Turkish presidential palace. တူရကီနန်းတော်ထဲမှာအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ Verde ဂွာတီမာလာ. အပြင်များစွာသောပရီမီယံဟိုတယ်နှင့်မောလ်များထက်မှမိမိတို့အခင်းလိုအပ်ချက်အဘို့ဤစကျင်ကျောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ.
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် အိန္ဒိယအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း ကြမ်းခင်းအတွက်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ.
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်အိန္ဒိယကနေပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးက Black ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီအစိုင်အခဲအနက်ရောင်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်တို့သည်လည်းတူရကီအတွက်မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်အခင်း၌ဤကျောက်မြင်နိုင်ပါသည်. ဤသည်က Black ကျောက်မီးဖိုချောင်ထိပ်တစ်ဘုံမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်.
သင်ကသုံးနိုငျ အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက် မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအတွက်, မြို့ရိုးကိုကြွပ်, နှင့်ကြမ်းခင်း. ဤသည်ကျောက်ပိုလန်လည်းရရှိနိုင်, သားရေ, brushed နှင့် Flammed အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအဘို့အပြီး.
Black ကက Galaxy ကျောက် / ကြယ်ပွင့်က Galaxy ကျောက်
Black ကက Galaxy အိန္ဒိယတှငျတှေ့အလှဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကပုံစံအတွက်စက်အပြောက်များကဲ့သို့ကြယ်များနှင့်အတူတစ်ဦးအစိုင်အခဲအနက်ရောင်ရောင်စုံကျောက်ဖြစ်ပါသည်. တူရကီကုမ္ပဏီများကမည်သည့်ညစ်ညူးခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်အနက်ရောင်ကတော့ galaxy ကျောက်ကိုဝယ်. ဤသည်ကျောက်ပရီမီယံစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများနှင့်စျေးကြီးလူနေအိမ်စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည်.
သင်ကသုံးနိုငျ Black ကက Galaxy ကျောက် မီးဖိုချောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့, မြို့ရိုးကိုကြွပ်, နှင့်အခင်း. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဂျမ်ဘို Gangsaw ပြားအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၌ဤကျောက်ဝယ်နိုင်, တန်ပြန်ပြား, 60 ထောင့်ကွက်×30 တွင်2နှင့်3စင်တီမီတာအထူ.
ဤသည်ကိုနောက်ခံအဖြစ် tan အရောင်နဲ့မှောင်မိုက်အညိုရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Tan ကဘရောင်းကကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မီးဖိုချောင်ထိပ်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဤလှပသောကျောက် Telangana ၏အိန္ဒိယပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. အစောပိုင်းက, အဆိုပါ Telangana Andhra Pradesh ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ဤသည်ကျောက်အိန္ဒိယကနေတူရကီအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးအညိုရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ.
သင်ကသုံးနိုငျ Tan ကဘရောင်းကကျောက် အခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ဖျား၌.
အဆိုပါ Verde စတားအဖြူရောင်ကြယ်ပွနှင့်အတူလှပသောအစိမ်းရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်၏အခြားအမည်အားခေါင်းဆောင် Hassan အစိမ်းရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Karnataka ၏အိန္ဒိယပြည်နယ်မှ. ဒီကျောက်များ၏အစိမ်းရောင်အရောင်မှာအစိမ်းရောင်အလွန်တောက်ပဖြစ်ပါသည်. သင်္ခါရအများအားဖြင့်ဒီကျောက်ထဲကနေမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် tabletop အောင်. ဤသည်ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့လည်းအလွန်ကောင်းပါသည်. ကျနော်တို့တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက် Verde စတားကျောက်တင်ပို့, tile နှင့်မီးဖိုချောင်အရွယ်အစား countertops.
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် ခေါင်းဆောင် Hassan အစိမ်းရောင်ကျောက် ကြမ်းခင်းအတွက်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, နှင့်ကောင်တာများ.
ပြာက Black ကျောက်
ပြာက Black ဖြစ်ကောင်းရရှိနိုင်ဈေးအပေါဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Ash ကိုအနက်ရောင်ကျောက်မိုင်းကို Rajasthan အိန္ဒိယပြည်နယ်တည်ရှိသည်. ကျနော်တို့ပုံမှန်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်ကွက်များအရွယ်အစား၌ဤကျောက်ဖြတ်. ဤသည်ကျောက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Brush ကြာ. ကျနော်တို့ကဒီကျောက်အများအပြားစီမံကိန်းများကိုပြုကြပြီ. ဒါကတစ်သမတ်တည်းနှင့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် ပြာအနက်ရောင်ကျောက် ကြမ်းခင်းအတွက်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာ, Backsplash အုပ်ကြွပ်, မှတ်ဥာဏ်.
မိုးသစ်တောစိမ်းလန်းနေတဲ့မြွေစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ထူးခြားသောပုံစံနှင့်အရောင်အဆင်းကြောင့်, ဒီတူရကီအတွက်မြို့ရိုးကိုဝတ်များအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးစကျင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. မိုးသစ်တောတွေမှာအစိမ်းရောင်ကို Rajasthan အိန္ဒိယပြည်နယ်ကနေတူရကီအတွက်တင်သွင်းနေသည်. ဒါကသဘာဝအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလှပကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖြစ်ပါသည်, သင်ပုံစံကြည့်ဖို့အံ့အားပါလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်သဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်.
သင်သည်သင်၏မိုးလုံလေလုံသို့မဟုတ်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုဝတ်စီမံကိန်းများအတွက်မုတ်သုံသစ်တောစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုသုံးနိုင်သည်, သင်သည်လည်းသင်၏အမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအတွက် backsplash အဘို့ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
မိုးသစ်တောဘရောင်းသို့မဟုတ် Bidasar ဘရောင်းအိန္ဒိယကနေအခြားထူးခြားသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, သောတူရကီဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးတင်သွင်းလျက်ရှိသည်. မိုးသစ်တောတွေဘရောင်းကျောက်မိုင်းမိုးသစ်တောတွေရွှေနှင့် RF အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအနီးတွင်တည်ရှိသည်. ဤသည်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့လည်းအသုံးပြုပါသည်. မိုးသစ်တောတွေဘရောင်းမှောင်မိုက်အညိုရောင် / ကြက်သွေးသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအညိုရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
သငျသညျမီးဖိုချောင် Backsplash ၌ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်နှင့်ပြင်ပမြင့်.
လှပတဲ့မုတ်သုံသစ်တောကိုရွှေစကျင်ကျောက်ကို Rajasthan အတွက် Bidasar အနီးကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အများစု Udaipur နှင့် Jaipur ဧရိယာ၌ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်စကျင်ကျောက်မုတ်သုံသစ်တောစိမ်းလန်းခြင်းနှင့် RF အညိုရောင်စကျင်ကျောက်မှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်မြို့ရိုးကိုဝတ်တစ်ခုလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ရှေ့မြင့်.
RF အစိမ်းရောင်နှင့် RF ဘရောင်းစကျင်ကျောက်များကဲ့သို့, သင် backsplash ၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဝတ်, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်နှင့်ရှေ့မြင့်.
ကန္တာရဘရောင်းအိန္ဒိယကနေအညိုအရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီအရောင်နဲ့ပုံစံတွင်ပိုမိုတူညီနေမှုနှင့်အတူအလွန်တသမတ်တည်းပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကျောက်ကန္တာရဘရောင်းဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အရောင်နဲ့ပုံစံကိုက်ညီမှုအရေးကြီးပါတယ်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသော application များနှင့်စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပွုနိုငျ.
သငျသညျကြမ်းခင်းအတွက်ကန္တာရဘရောင်းကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မီးဖိုချောင်ထိပ်, Backsplash အုပ်ကြွပ်နဲ့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတွေ. ဒီကျောက်ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိတူရကီနိုင်ငံအများအပြားစီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်.
ဒါကအိန္ဒိယကနေလှပတဲ့အဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့သောပေါက်ကိုဖောက်ပေးထားတယ်နှင့်ပုံစံမူကွဲသလောက်အဖြူရောင်ကျောက်နှင့်အတူဘုံပြဿနာများရှိသည်ပါဘူး. လှပတဲ့အဖြူရောင်ကျောက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုမဆိုအမျိုးအစားမလိုအပ်ပါဘူး. ဤသူသည်သင်တို့အခင်းများတွင်အသုံးပြုရန်နိုင်အောင်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောနှင့်စျေးပေါဖြစ်ပါသည်, မီးဖိုခန်း, ကြီးမားသောဧရိယာစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများကို.
သင်ကသုံးနိုငျ ပလက်တီနမ် White ကကျောက် အကြီးစားဧရိယာအခင်းအတွက်, ကြီးမားသောစီမံကိန်းများ, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, backsplash အုပ်ကြွပ်ပင်သည့်ကားလမ်း pavers အတွက်.
ပိုမိုပေါ့ပါးသွန်းခြင်းနှင့်အနက်ရောင်ပန်းပွင့်နှင့်အတူတစ်ဦးကလှပသောအနီရောင်ကျောက်. ဒီအမရရှိနိုင်အလှဆုံးအနီရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. သစ်မှာ Imperial နီကျောက်ယေဘုယျအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ထိပ်အောင်အတွက်အသုံးပြုသည်. အဆိုပါကျောက်အလွန်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. တူရကီနိုင်ငံအတော်များများကမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပစီမံကိန်းများကိုဒီကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြတယ်.
သင်ကသုံးနိုငျ နယူးမှာ Imperial နီကျောက် ကြမ်းခင်းအတွက်, ကြီးမားသောဧရိယာစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများကို, မီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်.